बाघको डरले घरभित्रै दिसा-पिसाब – Pahilo Page
बाघको डरले घरभित्रै दिसा-पिसाब
२८ पुष २०७८, बुधबार ०८:२५ 93 पटक हेरिएको
बाँके । राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं. ६ हब्रहवाका रामप्रसाद थारु साँझ पर्ने बित्तिकै घरभित्र पस्नुहन्छ । बिहान नहुँदासम्म रामप्रसादका परिवार घरबाहिर निस्किदैनन् । राति दिसा र पिसाव लागेमा उनीहरुले भित्रै व्यवस्थापन गर्छन् ।
रामप्रसाद भन्नुहुन्छ– ‘घरबाहिर बाघ आउँछ भन्ने डर हुन्छ । साँझ घरभित्र पसेपछि एकैपटक बिहान बाहिर निस्किन्छौं । दिसा, पिसाब लागेमा भित्रै गर्छौं । त्यसका लागि डब्बा राखेका हुन्छौं ।’हब्रहवाका चाँदनी थारुको गत शनिबार दाउरा काट्न जाँदा बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो । चाँदनीको शव भोलिपल्ट राप्ती नदीमा दाहसंस्कार गरिएको थियो । दाहसंस्कार गरेको ठाउँमा समेत बाघ आएको बताइएपछि स्थानीयवासी त्रसित भएका छन् ।
हब्रहवा गाउँ हुलाकी सडकदेखि दक्षिणमा पर्छ । सडकको उत्तरमा जंगल पर्छ । गाउँमै बाघ आएको थाहा पाएपछि हब्रहवामात्रै होइन, सिधनुवा गाउँका मानिस पनि त्रसित छन् । दुबै गाउँका मानिस साँझ परेपछि घरभित्र छिर्छन् र भोलिपल्ट बिहानमात्रै बाहिर निस्कन्छन् । सिधनुवाका कमलाकुमारी चौधरीले रातिमा कोही पनि घर बाहिर ननिस्किने बताउनुभयो । ‘हामीमात्रै होइन, गाउँका कोही पनि रातिमा बाहिर निस्कदैनन्, सबैले घरभित्रै डब्बा राखेर दिसा, पिसाब गर्छौं’– कमलाकुमारीले भन्नुभयो– ‘बाहिर निस्किदा बाघले खायो भने त मरिहालिन्छ । दिसा, पिसाब त सफा गरे भइहाल्छ नि ।’
यतिबेला हब्रहवा, सिधनुवा गाउँका हरेक घरको अगाडि आगो बाल्ने गरिन्छ । सडकका पोलमा बत्ती राखिएको छ । आगो र बत्ती बाल्दा उज्यालोमा बाघ आउँदैन भन्ने स्थानीयवासीलाई विश्वास लागेको छ । घरबाहिर आगो बाल्ने र मान्छेजति साँझ पर्ने बित्तिकै घरभित्र पस्ने गरेका छन् । स्थानीय फुलरानी थारुले साँझ परेपछि गाउँ सुनसान हुने बताउनुभयो ।
चाँदनीको घरमा छिमेकी कुरुवा बस्न आउँछन् । उनीहरु आउँदा समूहमा राँको बालेर आउने गर्दछन् । घर अगाडि धुनी लगाउँछन् । कुरुवा बसेर फर्किदा पनि समूहमा मात्रै राँको बाल्छन् ।चाँदनीभन्दा केही दिनअघि राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नं. ४ पर्सेनीका लीला विष्टको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो । लीलाको घर जंगल छेउमै छ । त्यहाँ पनि कुरुवा आउने मानिसहरु समूहमा राँको बालेर आउने र जाँदा पनि राँको बाल्ने गर्दछन् ।
बाँकेमा बाघको आक्रमणबाट दुई दिनको फरकमा दुईजनाको मृत्यु भएपछि ती गाउँका मानिस त्रसित भएका छन् । नरभक्षी बाघलाई नियन्त्रण गर्न चितवन र बर्दियाबाट निकुञ्जसम्बद्ध व्यक्ति आएका छन् । उनीहरुले हात्तीको प्रयोग गरेर बाघको खोजी गरिरहेका छन् । पछिल्लो तीन महिनामा बाँकेमा बाघले चारजनाको ज्यान लिएको छ ।